June 18, 2021 - Channel Lover
သရုပ်ဆောင် အောင်မိုး ကွယ်လွန်
June 18, 2021 by Channel Lover
သရုပ်ဆောင် အောင်မိုး ကွယ်လွန် သရုပ်​ဆောင် ကိုအောင်မိုးဟာဇွန်လ၁၈ ရက်​နေ့တွင်ဆီးချို ၊ နှလုံး​ရောဂါတို့ဖြင့်သင်္ဃန်းကျွန်းစံပြဆေးရုံကြီးတွင် ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဦးအောင်မိုးတစ်ယောက် ကောင်းရာမွန်ရာဘ၀ ရောက်ရှိနိုင်ပါစေ…။ ဦးအောင်မိုးကို သိတဲ့ အားပေးတဲ့ပရိတ်သတ်တွေရှိလားဗျ…။ ဦးအောင်မိုးအတွက် ဆုတောင်းစကားလေးတွေ ရေးပေးကြခဲ့ကြပါအူးနော်…။ သရုပ်ဆောင် အောင်မိုး ကွယ်လွန် 1 သရုပ်ဆောင် အောင်မိုး ကွယ်လွန်2သရုပ်ဆောင် အောင်မိုး ကွယ်လွန်3သရုပ်ဆောင် အောင်မိုး ကွယ်လွန်4သရုပ်ဆောင် အောင်မိုး ကွယ်လွန်5သရုပ်ဆောင် အောင်မိုး ကွယ်လွန်6unicode သရုပျဆောငျ အောငျမိုး ကှယျလှနျ သရုပျ​ဆောငျ ကိုအောငျမိုးဟာဇှနျလ၁၈ ရကျ​နတှေ့ငျဆီးခြို ၊ နှလုံး​ရောဂါတို့ဖွငျ့သင်ျဃနျးကြှနျးစံပွဆေးရုံကွီးတှငျ ကှယျလှနျသှားပွီဖွဈပါတယျ။ ဦးအောငျမိုးတဈယောကျ ကောငျးရာမှနျရာဘဝ ရောကျရှိနိုငျပါစေ…။ … Read more
ကလေးသူငယ်တွေ အထူးသတိထားရမယ့်အရာတစ်ခု ရေစိမ်လိုက်ရင် ပွတက်လာတတ်တဲ့ အရောင်လှလှလေးတွေနဲ့ အလုံးဝိုင်းဝိုင်းလေးတွေကို သိကြမှာပါ။ တကယ်တော့ ဒါဟာ ကလေးငယ်တွေကို သေစေတဲ့အထိအန္တရာယ်ရှိပါတယ်။ တရုတ်ပြည်အှ လင်မယားစုံတွဲတစ်တွဲဟာ သူတို့ရဲ့သမီးငယ်လေးကို Polymer Balls လို့ခေါ်တဲ့ ဒီအလုံးထုပ်လေးကို သကြားလုံး အထင်နဲ့ ဝယ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကလေးငယ်ရဲ့မိခင်က အလုံးလေးတစ်လုံးစမ်းစားကြည့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ ဒါဟာ သကြားလုံး၊ အချိုမုန့်မဟုတ်ဘဲ Polymer Balls တွေဖြစ်နေကြောင်းကို သိခဲ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီအချိန်မှာတော့ သူတို့ရဲ့သမီးငယ်လေးဟာ အထုပ်တစ်ဝက်နီးပါးစားပြီးသားဖြစ်နေပါပြီ။ ဒါနဲ့ပဲ အဆိုပါလင်မယားဟာ ကလေးငယ်ကို ဆေးရုံကိုခေါ်သွားပြီးဓာတ်မှန်ရိုက်တဲ့အခါ ဗိုက်ထဲမှာ Polymer Balls တွေ ပွတက်နေ တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ဒါနဲ့ပဲ ကလေးငယ်ကိုခွဲစိတ်မှုအမြန်လုပ်ပြီးကယ်တင်ခဲ့ရပါတယ်။ Polymer Balls ဟာ ကလေးငယ်တွေအတွက် ကစားစရာတစ်ခုအနေနဲ့ထုတ်ထားတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်ပြီး ရေအင်မတန်စုပ်ပါတယ်။ ရေထဲ မှာစိမ်ထားတဲ့အခါ … Read more
Six pack ကိုမှကြိုက်တဲ့မိန်းမဟာ ….. မင်းဗိုက်ပူလာ တဲ့အချိန်ထားခဲ့မှာပဲ
July 26, 2021 June 18, 2021 by Channel Lover
သိန်း၈၀၀၀တန် ကားလက်ဆောင်ပေးတဲ့ ယောက်ျားကိုလိုချင်ရင် … ကိုယ် ကိုယ်​တိုင်၌က ရုပ်ပိုင်းဆိုင်​ရာရော …. စိတ်ပိုင်းဆိုင်​ရာပါ အနည်းဆုံး တော့သိန်း ၄၀၀၀လောက်တန်အောင်ကြိုးစားကြပါ .. ကိုယ်တိုင်က ၁၀တန်းလည်းမအောင် ဝင်ငွေက တလ ၂သိန်းမပြည့် ၊ ရုပ်ရည်ကရွက်ကြမ်း ရည်ကြို … မိဘကလည်း လက်လုပ် လက်စား ဘဝသမား အဲ့လိုလူမျိုးတွေက သိန်း ၈၀၀၀ တန် ကားလက်ဆောင်ပေးတဲ့postကို …. သူတို့ရည်းစား ကောင်လေးတွေဝေါမှာ လာလာ Tag ကြတာမြင်တော့ ငါ့တပည့်တွေအစားရင်နာမိတယ် Ro ခွင့်ရှိတယ် Overtine ခွင့်မရှိဘူး။လက်ချင်းချိတ်ပြီး 200 တန်​ YBS တူတူစီးရဲတဲ့ လက်တွဲဖော် အစစ်ကိုသာရှာကြပါ သားတို့ မင်းဆီမှာငွေတသောင်းပဲရှိမှန်းသိရက်နဲ့ ငွေ၈၀၀၀သုံးရက်တဲ့မိန်းမဟာ မင်းသိန်း၁၀၀ရှိရင် သူ သိန်း၈၀ဖြုန်းဖို့ ဝန်လေးမှာမဟုတ်ဘူး … Read more
ဘဝကိုပြောင်းလဲသွားစေတဲ့ နောက်ဆုံးကျန်နေတဲ့ ဘတ် ၂ သန်းတန် ထိုင်းထီလက်မှတ်တစ်စောင်
ထိုင်းနိုင်ငံအလယ်ပိုင်း၊ နခွန်းပထုံခရိုင်၊ ဘန်လင်မြို့နယ် ရေသန့်စက်ရုံတစ်ရုံက မြန်မာအ လုပ်သမား ၁ ဦးဟာ ဇွန်လ ၁၆ ရက် မနေ့ကထွက်သွားတဲ့ ထိုင်းထီပထမဆုပေါက်ဂဏန်း ၆၉၁၈၆၁ ကို ၂ စောင်ပေါက်ခဲ့လို့ ဆုငွေ ဘတ် ၂ သန်း ဆွတ်ခူးရရှိပါတယ်။ အဆိုပါအလုပ်သမားမှာ အသက် ၃၀ ရွယ်ရှိ ကိုနေလင်းအောင်ဆိုသူဖြစ်ပြီး မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး မိထ္ထီလာမြို့နယ်တွင်းရှိ ကျေးရွာတစ်ရွာမှဖြစ်ကာ ထိုင်းမှာအလုပ်လာလုပ်တာ ၁ နှစ်လောက်သာရှိသေးကြောင်း၊ ထီကိုပုံမှန်ထိုးပေမယ့် တခါမှမပေါက်ဖူးဘဲ ပေါက်မယ့်ပေါက် ပထမဆု ၂ စောင်ပေါက်လို့ အရမ်းပျော်တယ်လို့ ကာယကံရှင်က ပြောပါတယ်။ ဖြစ်စဉ်မှာ ချင်းမိုင်မြို့ကကားကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့အသက် ၄၀ အရွယ်အရောင်းဝန်ထမ်း တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ကိုနေလင်းအောင်ဟာ ဇွန်လ ၁၆ ရက်နေ့ ၁၃:၀၀ ချိန်ကုမ္ပဏီကနေအလုပ်ကိစ္စနဲ့ … Read more
အိန်ဒိယနိုငျငံ အဆိုတျော ရဘေကျကာဆိုငျမောရီးက ဒျေါ အောငျဆနျးစုကွညျအတှကျ မှေးနလေ့ကျဆောငျ အဖွဈ မွနျမာလို သီခငျြးသီဆို (ရုပျ/သံ)
အိန္ဒိယနိုင်ငံ အဆိုတော် ရေဘက်ကာဆိုင်မောရီးက ဒေါ် အောင်ဆန်းစုကြည်အတွက် မွေးနေ့လက်ဆောင် အဖြစ် မြန်မာလို သီချင်းသီဆို (ရုပ်/သံ) အဆိုတော် ရေဘက်ကာဆိုင်မောရီးက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည့်အတွက် မွေးနေ့လက်ဆောင် သီချင်းသီဆို အိန္ဒိယနိုင်ငံ မီဇိုးရမ်ပြည်နယ်ရဲ့ နာမည်ကြီး အဆိုတော်ရေဘက်ကာဆိုင်မောရီးက…… နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ လာမည့် ဇွန်လ ၁၉ ရက်နေ့တွင် ကျရောက်မည့် အသက် ၇၆နှစ်မြောက်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်နေဖြင့် သီချင်းလက်ဆောင်ပေးအပ်ခဲ့တာပါ….. ရေဘက်ကာဆိုင်မောရီး အနေဖြင့် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီအရေးအတွက် တတ်ကြွလှုပ်ရှားသူတစ်ဦးဖြစ်ပြီး မြန်မာ့နွေဦးတော်လှန်ရေးအတွက် ဂုဏ်ပြု တေးသီချင်းများကိုသီဆိုခဲ့သူတစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနွေဦးတော်လှန်ရေးအတွက် သီချင်း လေးပုဒ်ကိုလည်း သီဆိုထားသူဖြစ်ပါတယ်…. credit အိန္ဒိယနိုင်ငံ အဆိုတော် ရေဘက်ကာဆိုင်မောရီးက ဒေါ် အောင်ဆန်းစုကြည်အတွက် မွေးနေ့လက်ဆောင် အဖြစ် မြန်မာလို သီချင်းသီဆို (ရုပ်/သံ) အဆိုတော် ရေဘက်ကာဆိုင်မောရီးက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည့်အတွက် … Read more
မြန်မာပြည်သူတွေ လုပ်ဆောင်ရမယ့် မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ကြီး၏ လမ်းညွှန်ချက် .
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေလုပ်ကြဖို့ မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ကြီးရဲ့ မိန့်ကြားချက် သူ့ဘာသာသူ ယတြာဘယ်လောက်ကောင်းကောင်း အမိန့်ပြန်တမ်းဘယ်လောက် ပြင်းပြင်း စကြာဝတေးမင်းတောင် အမိန့်ပေးလို့ မရတဲ့ နတ်မင်းကြီး ၂ ပါးရှိပါတယ်။ အဲ့နတ်မင်းကြီး ၂ပါးက လောကပါလနတ်မင်းကြီးနဲ့ သာသနာစောင့်နတ်မင်းကြီးပါ။ မည်သူမဆို ဒါန သီလ ဘာဝနာ တစ်ခုခု ပြု ပြီးနောက် “လောကပါလနတ်မင်းကြီးနှင့် သာသနာစောင့်နတ်မင်းကြီး ဘေးရန်ကင်းပါစေ၊ကိုယ်ဆင်းရဲကင်းပါစေ၊စိတ်ဆင်းရဲကင်းပါစေ။ ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာချမ်းသာစွာဖြင့် မိမိတို့ ခန္ဓာတာဝန်ကို လွယ်ကူစွာဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေ” လို့ ၃ ခေါက်ရွတ်ပြီး အထူး မေတ္တာပို့ပါ။ ပြီးရင် မိမိဘဝမှာ အထူးပြုခဲ့ဖူးသောကုသိုလ် ( ဥပမာ။ ။ ရှင်ပြုအလှူ၊ ပုဇင်းတက်ခဲ့ခြင်း၊ ကျောင်းအလှူ၊ ရေတွင်းရေကန် တံတားအလှူ၊ ရွှေသက်န်းအလှူ၊ ကမ္မဌာန်း ဝိပသနာ တရားအားထုတ်ခဲ့မှု ၊ မဂ်ဥာဏ် ဖိုလ်ဥာဏ် ရရှိခဲ့မှု … Read more
စင်းဘူရီတွင် ငါးသည်တဦး ထိုင်းထီ ၁၂ သန်းကံထူး
စင်းဘူရီတွင် ငါးသည်တဦး ထိုင်းထီ ၁၂ သန်းကံထူး ပြီးခဲ့သည့် ဇွန်လ ၁၆ ရက်နေ့အပတ်စဉ်တွင် စင်းဘူရီမြို့စည်ပင်သာယာဈေးရှိ အသက် ၅၃ နှစ်အရွယ် တီလားဗီးယားငါးသည်တဦး ထိုင်းထီ ၁၂ သန်းကံထူးသည်ဟု သိရသည်။ သူမ၏ပစ်ကပ်ကားနံပါတ်ကိုကောက်ထားသည့် 691861 နံပါတ်ကို မွေးဂဏန်းအဖြစ်အပတ်စဉ်ထိုးဖြစ်ကြောင်း၊ သူမရောင်းချနေသည့်ဈေးအတွင်းရှိ ထီအရောင်းဆိုင်တွင် ၂ စောင်တွဲဝယ်ယူခဲ့ကြောင်း ပုံမှန်အတိုင်း နံနက် ၁ နာရီကတည်းကငါးရောင်းထွက်လာ၍ ထီပေါက်သည်ကိုမသိရှိရကြောင်း ထီပေါက်ကြောင်းသိရှိရပြီးနောက် မိမိရောင်းချနေသည့် ကီလိုဂရမ် ၂ဝဝ ခန့်ရှိသည့်ငါးများကို ဈေးသူဈေးသားများအား အခမဲ့ပေးဝေခဲ့ကြောင်း၊ စွမ်းအားဖြည့်အချိုရည်များကိုပါ ပေးဝေခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။ ထို့နောက် မြို့တော်ဗန်ကောက်ရှိ ထီရုံးချုပ်ရှိရာသို့ ခရီးနှင်ခဲ့ပြီး ငွေထုတ်ယူခဲ့သည်ဟု သူမဆိုသည်။ ကနဦးတွင် ကံထူးထားသည့်ငွေတချို့ကို သူမအိမ်အနီးရှိဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင် ဒါနပြုမည်ဟုသိရပြီး ကျန်ငွေများကို မည်သို့စီမံခန့်ခွဲမည်ကို မသိရသေးကြောင်း သူမဆိုသည်။ … Read more
မိုးကြီးနိုင်တဲ့ မြို့များ သတိပေးချက်နှင့် နေ့စဉ် မိုးလေဝသ ခန့်မှန်းချက်များ
မိုးကြီးနိုင်တဲ့ မြို့များ သတိပေးချက်နှင့် နေ့စဉ် မိုးလေဝသ ခန့်မှန်းချက်များ…..(ရုပ်သံ) 18/06/2021…မောက်းတော ဘူးသီးတောင် ကျောက်တော် ရသွေတောင် ပလက်ဝ မတူပီ မင်းတပ် မိုးကြီးနိုင်ပါတယ် (၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၁၈)ရက်နေ့ နံနက်(၇:၀၀)နာရီအချိန် ထုတ်ပြန်ချက်) ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် အ‌ ခြေ အ နေ။ကပ္ပလီပင်လယ်ပြင်နှင့် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတို့တွင် မုတ်သုံလေ အားအသင့်အတင့်ရှိနေပြီး၊ ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တွင် မုတ်သုံလေ အားကောင်းနေပါသည်။ ယနေ့ညနေအထိခန့်မှန်းချက်။စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းနှင့် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတို့တွင် နေရာကျဲကျဲ၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနှင့် ကချင်ပြည်နယ်တွင် နေရာစိပ်စိပ်နှင့် ကျန်တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်တို့တွင်နေရာအနှံ့အပြား မိုးထစ်ချုန်းရွာပြီး၊ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဒေသအလိုက်နှင့် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးနှင့် ချင်းပြည်နယ်တို့တွင် နေရာကွက်၍ မိုးကြီးနိုင်ပါသည်။ ရွာရန်ရာနှုန်းပြည့် ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာ့ပင်လယ်ပြင်။ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်၊ ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်နှင့် ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့တွင် တစ်ခါ … Read more